Ithangi lesitoreji se-cryogenic liyitanki lokugcina elinemigqa emibili evundlile noma evundlile lokugcina oksijini, i-nitrogen, i-argon, i-carbon dioxide neminye imithombo yezindaba. Umsebenzi oyinhloko ukugcwalisa nokugcina uketshezi lokushisa okuphansi. Izigaba Amathangi Esitoreji Esincane, I-Vertical Storage Tank Ithangi lesitoreji se-cryogenic liyitanki lokugcina elingenalutho eliqondile noma elingenalutho lokugcina isitoreji sokugcina i-oxygen, i-nitrogen, i-argon, i-carbon dioxide neminye imidiya. Umsebenzi omkhulu ukugcwalisa futhi ...
Ovundlile isitoreji se-cryogenic Ngaphansi komthamo ofanele nengcindezi, ithangi ngalinye lesitoreji se-cryogenic lifane kakhulu ukonga izindleko nokunciphisa isikhathi sokulethwa. Izinketho eziningi ze-bolt-on modular zinikezwa ukuhlangabezana nezidingo eziningi zohlelo lokusebenza. Imininingwane eyethulwe i-Runfeng ihlinzeka ngamathangi wokugcina igesi ajwayelekile ngezincazelo ezimbili, mpo futhi ivundlile, ingcindezi yokusebenza evumelekile ephezulu yamalitha angama-900 kuya ku-20,000 (amalitha angu-3 400 kuya ku-80,000). 175 kuya ku-500 psig (12 kuya ku-37 barg). Ngaphansi kwe-capa ekahle ...
Ukwethulwa kwethangi lokugcina uketshezi oluncane lwe-ansuda Ansuda luhlobo lwemishini encane yegesi edidiyelwe nesisekelo esinqunyelwe kanye ne-vacuum ephezulu enezingqimba eziningi ze-adiabatic cryogenic tank tank futhi ifakwe ukugcwaliswa ketshezi kwe-cryogenic nezinhlelo zokuzicindezela ngokwazo. Izigaba: i-Ansuda, iTanki Lokugcina Elincane Okwamanje, i-Ansuda ithangi lokugcina uketshezi oluncane, njengendlela elula yokuhambisa igesi elula eshintsha amasilinda ensimbi kanye namaDewars, isetshenziswe kabanzi kwa-h ...
Izindlela ezine ezihlangene ze-ST-10C
I-Cryogenic Globe Valve
I-Disk Eqhekekile Yasendlini Ephukile (Uhlobo lwe-LF)
ICustomer Slotted Domed Rupture Disk iqukethe isigaba esinezinsimbi esinezicucu kanye nolwelwesi lokufaka uphawu. Lapho ingcindezi eyeqisayo ivela ohlelweni lokuvikela, idiski iyaqhuma emigqeni efakwe ngaphambi kokunikeza ukukhululeka okugcwele. Izinhlobo Zezinhlobo Ezijwayelekile Zesakhiwo Sokuhlanjululwa Kwediski (LF) Ezakhelwe igesi, uketshezi, insizakalo yothuli. Ukucindezela okukhulu kokusebenza kuze kufike ku-80% wengcindezi encane yokuqhuma. Zimbalwa izingcezwana kumabhasi ...